Apple namoaka Safari Technology Preview 128 | Avy amin'ny mac aho
Ny orinasa Cupertino dia nanangana kinova fanandramana vaovao an'ny Safari Technology Preview 128 ary manitsy ny hadisoana sasany hita tao amin'ny kinova teo aloha izay natomboka roa herinandro lasa izay ho fanampin'ny ampio ny fanovana famolavolana amin'ny bara fizarana mpitety.
Ny fanavaozana ny Safari Technology Preview vaovao Azo ampiasain'ny mpampiasa rehetra izay nametraka ny kinova taloha Ka raha ianao dia iray amin'ireo efa nanana ny kinova fanazarana taloha, afaka manavao izany ianao, 128.
Ity famoahana vaovao ny browser browser an'ny Apple ity Azo alaina amin'ny alàlan'ny rafitra fanavaozana ny lozisialy ao amin'ny Mac App Store ho an'izay rehetra nisintona ny tranokala. Raha ny tadiavinao dia ny mijery ireo naoty feno amin'ny kinova vaovao amin'ny fanavaozana, misy ao amin'ny tranokala tompony izay manana an'i Apple mifandraika amin'ity tranonkala ity.Mba hahafahana mifankahazo tsara dia mitovy amin'ny kinova beta an'ny rindrambaiko Apple ny browser izay horesahintsika. Ny tanjon'ny sonian'i Cupertino miaraka amin'ireto betas ireto dia ny fanangonana vaovao, fanehoan-kevitra avy amin'ny mpamorona sy mpampiasa momba ny fiasa, ny fikarohana ny bibikely ary ny fivoaran'ny browser. Tsy toa azy ireo, tsy misy olana ny fananana Safari sy Safari Technology Preview mandeha amin'ny fotoana iray ihany amin'ny Macs.
Marina fa toa natao ho an'ny mpamorona indrindra ity browser ity, saingy tsy marina izany rehetra izany ary tsy takiana izany mba tsy ahafahan'ny mpampiasa toa anao mitsapa azy amin'ny Mac ary mitatitra ireo lesoka na olana hita ho Manzana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Apple namoaka Safari Technology Preview 128
Fanavaozana ny fiarovana lehibe ho an'ny macOS Mojave sy Catalina